यातना पाएकी महिलालाई ५५ हजार रुपैयाँ सहयोग- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
यातना पाएकी महिलालाई ५५ हजार रुपैयाँ सहयोग
श्रावण ६, २०७८ वसन्तप्रताप सिंह
बझाङ — श्रीमान्ले निर्घात कुटपिटपछि कान काटिदिएको जयपृथ्वी नगरपालिका–१ भण्डारगाउँकी २१ वर्षीया जानकी नेपालीलाई सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले र काठमाडौंको धुम्बाराही निवासी महेश पाण्डेले आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश केसीले ३० हजार र पाण्डेले २५ हजार गरी नगद ५५ हजार रकम जानकीलाई सहयोग गरेका हुन् । आइतबार कान्तिपुर दैनिकमा ‘श्रीमतीलाई निर्घात कुट्दै कान काटे’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचार पढेपछि पीडितलाई उपचारमा सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले नगद सहयोग गरेको सहयोगीहरूले बताएका छन् ।
केसीले हिंसारहित समाज बनाउन यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध समाजमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने र घटनामा परेकाको जीवन सहज बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । पाण्डेले पीडित महिलाको पुनःस्थापना र जीवन निर्वाहका लागि सहयोग होस् भनेर आफूले अरू सहयोगीको पनि खोजी गरिरहेको बताए । ‘दुःखमा परेको मान्छेलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ । उहाँलाई थप सहयोगका लागि साथीहरूसँग पनि पहल गरिरहेको छु,’ पाण्डेले भने ।
सहयोगीहरूले दिएको नगद रकम इन्सेकका प्रतिनिधि रमेश केसी, पत्रकार महासंघका पूर्वजिल्ला अध्यक्ष जगदीश रोकायाको रोहबरमा अल्पकालीन महिला सुरक्षा आवास गृहकी इन्चार्ज गीता शाहीले पीडित नेपालीलाई सोमबार हस्तान्तरण गरेकी छन् । विवाह भएको केही दिनबाट लगातार हिंसा खेपिरहेकी नेपालीले केसीलाई फोन गरेर धन्यवाद दिँदै कानुनी उपचार र पुनःस्थापनामा सहयोग गर्न अनुरोध गरेकी थिइन् । आफू पतिको घरमा बस्न नसक्ने अवस्था भएको बताउँदै उनले आफ्नो जीवन रक्षा र तीन छोराछोरीको शिक्षादीक्षाका लागि प्रबन्ध मिलाउनका लागि पहल गरिदिन पत्रकार र मानवअधिकारकर्मीसँग अनुरोध समेत गरेकी छन् । ‘अब म त्यसको घरमा गएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । छोराछोरीको र मेरो जीवन धान्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । उसलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्‍यो,’ उनले भनिन् ।
निर्घात कुटपिटपछि कान काटेर फरार रहेका जानकीका पति मनोज नेपालीलाई प्रहरीले आइतबार नै पक्राउ गरेर ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेर घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको छ । फरार रहेका मनोजलाई बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–७ सुवेडास्थित एक आफन्तको घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रमुख डीएसपी रूपक खड्काले बताए ।
कान्तिपुरमा घटनाका बारेमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि यो विषयमा चासो व्यक्त गर्दै पीडितलाई छिटो कानुनी दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको डीएसपी खड्काले बताए । मनोजले गत बुधबार दिउँसो एक जना आफन्तसँग किन हाँसेको भन्दै साँझ जानकीलाई निर्घात कुटपिट गरेका थिए । मदिराको मातले लट्ठिएका उनले कुटपिटका क्रममा जानकीको बायाँ कान काटिदिएका थिए । कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएकी जानकी अल्पकालीन महिला सुरक्षा गृहको संरक्षणमा उपचार गराइरहेकी छन् । लगातारको हिंसाका कारण मानसिक समस्यामा रहेकी उनलाई परामर्श दिने काम भइरहेको र पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएपछि पुनःस्थापनाका लागि पहल गरिने अल्पकालीन महिला सुरक्षा गृहकी इन्चार्ज गीता शाहीले बताइन् ।
प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०९:१९
श्रीमतीलाई निर्घात कुट्दै कान काटे
मदिराले लट्ठिएका श्रीमान्‌ले आफन्तसँग दिउँसो किन हाँसेको ? भनेर श्रीमतीलाई यातना दिए
‘लास्टमा काटिएको कान मेरो हातमा दिँदै भोलि मेडिकल गएर जोडिमाग्नु भन्यो र आफू भाग्यो ।’
श्रावण ३, २०७८ वसन्तप्रताप सिंह
बझाङ — जानकी नेपाली टाउकोमा सेतो बाक्लो पट्टी बेरेर अस्पतालको बेडमा पल्टिरहेकी छन् । घरीघरी बर्बराउने उनको शरीरभरि छुरीले काटेका घाउ छन् । धेरैजसो घाउमा खाटा बसिसकेका छन् । कतिपय अझै आलै छन् । उनको जीउ सुकेर कडा कुपोषण लागेका बालबालिकाको जस्तो भएको छ ।
जिल्ला अस्पताल बझाङमा उपचार गराउँदै जानकी नेपाली । तस्बिर : वसन्तप्रताप/कान्तिपुर
जिल्ला अस्पतालको बेडमा दुई वर्षको बच्चासहित छटपटाइरहेकी जयपृथ्वी नगरपालिका–१ भण्डारगाउँकी २१ वर्षीया जानकीको चार दिनअघि मात्रै श्रीमान् मनोजले निर्घात कुटपिटपछि बायाँ कान काटिदिएका हुन् ।
मदिराले लट्ठिएका मनोजले एक आफन्तसँग दिउँसो किन हाँसेको ? भनेर उनलाई बुधबार कुटपिट गरेका थिए । ‘जे हातमा पर्‍यो त्यही सामानले कुट्यो, म ढलेपछि चक्कुले कान काटिदियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि काटिएको ठाउँमा दाँतले चपायो अनि रगत चुस्यो । लास्टमा काटिएको कान मेरो हातमा दिँदै भोलि मेडिकल गएर जोडी माग्नु भन्यो र आफू भाग्यो ।’ अहिले उनको काटिएको कानको शल्यक्रिया भएको छ । शल्यक्रिया सम्पन्न भए पनि कान जोडिने/नजोडिने निश्चित नभएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
जानकीमाथि उनका श्रीमान्ले गरेको पाशविक हिंसाको यो पहिलो घटना भने होइन । १५ वर्षको उमेरमा ९ कक्षा पढ्दै गर्दा विवाह गरेकी उनले ६ वर्षको अवधिमा श्रीमान्को कुटाइका कारण पटक–पटक मृत्युशय्यामा पुग्नु परेको बताइन् । मनोजले विवाहको केही महिनापछि नै उनलाई यातना दिन सुरु गरेका थिए । सासूससुरालगायत सबै परिवार भारतको बैंग्लोरमा बस्ने जानकी श्रीमान् र तीन छोराछोरीमात्रै घरमा बस्थे । उनका चार वर्ष, अढाई वर्ष र १६ महिनाका तीन सन्तान छन् ।
गाउँभन्दा अलि टाढा रहेको उनको घरमा श्रीमान्ले हरेक साँझ कुनै न कुनै बहानामा उनलाई यातना दिइरहन्थे । ‘जे हातमा पर्‍यो त्यही सामानले हान्थ्यो । शरीरभरि चुरोट बिँडीका ठूटा र अगुल्टाले पोल्थ्यो । पीडाले म बेहोस हुन्थेँ,’ पोलेका दाग देखाउँदै उनले भनिन्, ‘कुट्दा कुट्दा थाकेपछि आफैं शान्त हुन्थ्यो । भोलिपल्ट बिहान हिजो रक्सीको मातमा गल्ती गरिहालेँ भनेर माफी माग्थ्यो ।’ मनोजको घरमा बेलाबेला झगडा गरिरहने र परिवारमा सधैं किचलो भइरहने गरेको छिमेकी उमेश श्रेष्ठले बताए ।
निरन्तरको यातना सहन नसकेर आत्महत्या गर्न खोजे पनि बालबच्चाको माया लागेर मर्न नसकेको उनले बताइन् । दुई वर्षअघि ‘अब कुटपिट गर्दिनँ, भारत जाउँ’ भनेर फकाएर लगेको उनलाई एक वर्षसम्म अस्पताल भर्ना हुनुपरेको थियो । रक्सी खाएर आएको मनोजले सानो ग्यास सिलिन्डरले टाउकोमा हिर्काउँदा जानकी दुई महिनासम्म बेहोस भएकी थिइन् । ‘एक वर्ष उतै उपचार गराएर गएको माघमा बहिनीलाई घर ल्याएका थियौं,’ जानकीका दाजु गोविन्द नेपालीले भने, ‘पापीले फेरि यस्तो हालत गरिदियो ।’ मनोजले यौनसम्पर्कका बेला पनि अमानवीय यातना दिने गरेको कुरा बहिनीले आमासँग सुनाएको उनले बताए । ‘यौनसम्पर्क गरिसकेपछि यौनांगमा चुरोटले पोल्ने, चक्कुले काटेर यातना दिने गरेको रहेछ । बहिनीले यो कुरा हामीलाई भन्न नसकेर आमालाई सुनाएकी थिइन्,’ गोविन्दले भने ।
निरन्तरको यातना र टाउकोलगायत संवेदनशील भागमा परेको चोटका कारण जानकीको मानसिक अवस्थामै असर परेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । मानसिक समस्याका कारण उनी एकोहोरो टोलाउने, झस्किने र अहिले भइरहेका घटनामा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्नेलगायत समस्या देखिएको छ । ‘जानकीलाई एन्जाइटी डिसअर्डर भएको देखिन्छ,’ जिल्ला अस्पताल प्रमुख डा. सन्दीप ओखेडाले भने, ‘लामो समय गम्भीर खालको यातना भोगेका कारण उनको दिमागमा वर्तमानमा भइरहेका घटना भन्दा विगतका घटना बढी स्मरण आउने भएकाले झस्किने र बिना कारण तर्सिने गरिरहेकी छन् ।’ लामो यातनाका कारण विक्षिप्त अवस्थामा रहेकी उनलाई मानसिक उपचार र परामर्शको खाँचो रहेको डा. ओखेडाको भनाइ छ । शृंखलाबद्ध रूपमा यातना भोगेकी भए पनि जानकीले हालसम्म कानुनी उपचार पाएकी छैनन् । भारतमा घटना भएका बेला उनका सासूससुराले छोराविरुद्ध भारतीय प्रहरीमा उजुरी गरे पनि कुनै कारबाही नगरी छाडिदिएको जानकीका दाजु गोविन्दले बताए । यस पटक पनि उनीहरूले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । तर मनोजलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । पीडक नगरपालिकाभित्रै घुमिरहेको र फोन गरेर धम्की दिइरहे पनि प्रहरीले कारबाहीमा चासो नदेखाएको उनको आरोप छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकीमाथि भएको हिंसाको घटनामा ठाडो उजुरी आए पनि जाहेरी नपरेको र पीडकको खोजी गरिरहेको बताएको छ । ‘ठाडो उजुरीमार्फत घटनाबारे हामी कहाँ जानकारी आएको छ,’ बझाङका प्रहरी प्रमुख डीएसपी रूपक खड्काले भने, ‘हामीले पीडकको खोजी गरिरहेका छौं । मुद्दा नै लिएर आउनुस् हामी कारबाही अगाडि बढाउँछौं भनेका छौं ।’ उनले मुद्दा नै दर्ता गरेपछि अहिले नभए पनि कुनै बेला पीडकलाई गिरफ्तार गरेर कारबाही गर्न सकिने बताए ।
जानकीको घटना महिला अल्पकालीन सुरक्षित आवास गृहले हेरिरहेको र परामर्शपछि कस्तो मुद्दा दर्ता गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको आवास गृहकी प्रमुख गीता शाहीले बताइन् । ‘अहिले पीडितको शारीरिक र मानसिक अवस्था ठीक नभएकाले हामीले मुद्दा दर्ता नगर्न सुझाव दिएका हौं,’ शाहीले भनिन्, ‘उनलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिसकेपछि हामी काउन्सिलिङ गरेर कस्तो खालको मुद्दा हाल्ने भनेर सल्लाह दिने सोचमा छौं ।’
पीडित जानकीले भने मनोजसँग बस्दा जुनसुकै बेला पनि ज्यानको खतरा रहेकाले आफूलाई ६ वर्षसम्म दिएको यातनाको क्षतिपूर्ति, पीडकलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने र बालबच्चाको भरणपोषणको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएकी छन् । ‘त्योसँग बस्दा मलाई जुनसुकै बेला पनि मार्न सक्छ । मलाई छुट्टै बसेर खाने व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । त्यो पापीलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्‍यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन् ।
प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ ०८:५४